Copper (ကြေးနီ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Copper (ကြေးနီ)
Copper (ကြေးနီ) ကဘာလဲ။
ကြေးနီ ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Copper ဟာ သတ္တုဓါတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အစားအစာတွေမှာ၊ အထူးသဖြင့် အသားတွေမှာနဲ့ ပင်လယ်စာတွေမှာ၊ အခွံမာသီးတွေ၊ cocoa ထုတ်ကုန်တွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓါဟာ Copper ကို အရိုးတွေနဲ့ ကြွက်သားတွေထဲမှာ များသောအားဖြင့် သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ အသည်းဟာ သွေးထဲမှာ ရှိတဲ့ Copper ပမာကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
Copper ကို Copper ချို့တဲ့မှုတွေနဲ့ သူ့ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ သွေးအားနည်းမှုတွေကို ကုသဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ Copper ချို့တဲ့မှုကတော့ ရှားပါတယ်။ Copper ချို့တဲ့မှုတွေဟာ အစားအသောက်ကနေ ဇင့်ဓါတ်များပြားစွာ ရရှိတဲ့သူတွေ၊ အူဖြတ်ထုတ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ အစာပြွန်ကနေ အစာစားရသူတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အာဟာရချို့တဲ့တဲ့ ကလေးတွေဟာလည်း Copper ချို့တဲ့မှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Copper ကို အနာကျက်ခြင်းကို အားပေးဖို့လည်း အသုံးပြုပါတယ်။ အဆစ်ရောင်ခြင်းနဲ့ အရိုးပွခြင်းကို ကုသဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန် အစားအသောက်စားသူတွေဟာ Copper ဓါတ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေ မရှိပါဘူး။ အားကစားသမားတွေတောင်မှ ကျန်းမာစွာ စားသောက်ရင် Copper ဓါတ် မလိုအပ်တတ်ပါဘူး။
Copper ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ခန္ဓါဟာ Copper အနည်းငယ်သာ လိုအပ်ပြီးတော့ သူဟာ အစားအသောက်တွေမှာ သဘာဝအတိုင်း အနည်းငယ်ပါဝင်တာကြောင့် လေ့လာမှုတွေက အပိုဖြည့်စွက်စာအဖြစ် အသုံးပြုဖို့ မလိုဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ Copper ချို့တဲ့မှုဟာ သွေး၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် (Menkes disease, Wilson’s disease, နဲ့ ကင်ဆာရောဂါ)။
ကြေးနီ အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Copper ကို အေးမြပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာတွေမှာ ထားသင့်ပြီး အပူနဲ့ ရေငွေ့ရိုက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
ကြေးနီ က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
Copper ကို ကလေးတွေမှာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့ ကလေးနို့တိုက်နေသူတွေ၊ Haemodialysis နဲ့ Wilson’s disease ရှိသူတွေမှာ ပမာဏ အများကြီး အသုံးပြုဖို့ မသင့်ပါဘူး။ မွေးရာပါ ရောဂါ ရှိသူတွေ (Copper အဆိပ်သင့်သူတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ အသည်းခြောက်ရောဂါဖြစ်သူ)မှာ Copper အပိုအသုံးပြုခြင်းဟာ ရောဂါကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။
ကြေးနီ ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Copper ကနေ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ရနိုင်ပါသလဲ။
Copper ကနေ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Copper ဟာ အသည်းနဲ့ အစာအိမ်လမ်းကြောင်း ပျက်စီးမှုတွေအပါအဝင် အခြားဆိုးကျိုးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကြေးနီ ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Copper ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ကြေးနီ အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Copper ကို တစ်နေ့မှာ 900 mcg အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Copper ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ကြေးနီ က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Copper ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Print version. Page 204.
Copper. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 902-copper.aspx?activeingredientid=902&activeingredientname=copper. Assessed August 7, 2016.